Yangon | Yangon Region | Myanmar | Nissan | Myanmar No.1 Car Site for New Car & Used Car - MyanmarCarMarketplace.com | Nissan Juke GrandTour 2010
Nissan Juke GrandTour 2010 - 299.00 Lakhs
•အနက်‌ရောင် SAPPHIRE Black B20 R
•????16GT Grade က‌တော့ 1600CC MR16DDT Turbo ENGINE နဲ့လာပါတယ်။ မြင်း ‌ကောင်‌ရေ 190 horse power maximum ထွက်ပြီး ဆီမစားပဲ 3000CC Engine နီးပါး အဆွဲအရုန်း ကောင်းပါတယ်•ENGINE, Gearbox, Exhaust and suspension အကုန်ကွဲ သွားပါတယ်။
•ဒီကားက‌တေတာ့ 2WD ဆိုရင် F15 နဲ့စပြီး GT Gradeဖြစ်ပါတယ်။
•????GT grade ‌တွေမှာ 18 inch Alloy ‌တွေဖြစ်သွားပြီး ဘိန်း‌လေးလုံး 4Discs brake ‌တွေဖြစ်သွားပါတယ်။ GT ထဲမုာ Grade ကို A တလုံး AA နှစ်လုံး AAA သုံးလုံး chassis plate နဲ့ ခွဲထားပါတယ်။2wheel full grade ဖြစ် တဲ့အတွက် 4wheel switch error, gearbox error မရှိတော့ပါ။
•ဂီယာထိုးတဲ့ အုံက အရင် 1.5 ‌တွေလို တတန်းထဲမဟုတ်‌တော့ပဲ zip z ပုံ စံဖြစ်သွားကာ Auto and Manual +- shift Semi Auto ဖြစ် သွားကါတယ်။
•????GT grade အပြည့်အဓိက အ‌ခြေခံအချက်ကွာခြားသွားတာက‌တော့ Push Start, မှန်အမဲ DIGITAL AIR CON .Steering ကြိုးချုပ် . လက်ကိုင်ကွင်းက steel . ထိုင်ခုံ‌တွေက digital ပုံစံပျားကွက်ပုံစံ ‌တွေဖြစ်ပြီး အတွင်းခန်းအနီ ။ original factory Hdd TV, ‌နောက် back camera Japan orginal မြင်း‌ကွေး , volume control လည်း ပါ ပါ‌သေးတယ်။
☎️ဆက်သွယ်ရန်: 09 5121371
Nissan Juke 2011 1500 cc ,2WD ရန္ကုန္လိုင္စင္ 7N , Black , RX type V Grade ျမင့္၍လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အတြင္းခန္း အနီေရာင္ Push start , Smart Key , Digital Aircon , Original TV & Backcam Original Alloy with New Tyre Original Fog Lights3Mood Driving...